Natural Gasi / Biogas jenareta
Biomass Gesi jenareta
LPG Gesi jenareta
Silent / Container Type Gesi jenareta Set
Chigadzirwa Magadzirirwo E 280KW LPG Gesi jenareta
chigadzirwa zvigadzirwa zve50KW LPG gasi jenareta
Silent & Container Type Gesi jenareta Set
Chigadzirwa Magadzirirwo E800KW Biomass Gesi jenareta
Chigadzirwa Magadzirirwo E400KW Biomass Gesi jenareta
Chigadzirwa Magadzirirwo E 260KW Biomass Gesi jenareta
Chigadzirwa Magadzirirwo E80KW Biomass Gesi jenareta
chigadzirwa zvigadzirwa zve160KW gasi / bioga ...
Injini yezvinhu izvi zvakateedzana inoshandisa Guangxi Yuchai base gasi injini, inova inozivikanwa inozivikanwa yemukati yekupisa injini mugadziri muChina. Injini yegasi yakagadziridzwa uye yakavandudzwa pamwe chete neNPT Kambani.
Injini yemagetsi musanganiswa system, kuvesa uye kudzora system zvinoenderana zvakasununguka uye zvakagadziriswa neNPT, zvinovimbika uye zvinogara.
Chigadzirwa Magadzirirwo E200KW Biomass Gesi jenareta
Iyi nhevedzano yezvigadzirwa ndizvo zvikuru zvigadzirwa zvekambani. Injini inotora Guangxi Yuchai akateedzana gasi injini, inova yemumba inozivikanwa mukati mekupisa injini yekugadzira. Injini dzese dzegesi dzakagadzirwa uye dzakagadziridzwa zvinoenderana nekushandiswa kwemagasi akasiyana-siyana anotsva akabatana neNaiPuTe kambani. Simba rechigadzirwa rinofukidza 50-1000kw, iine simba rakakwira remabhiza, torque yakakwira, kufukidza simba rakawandisa, kuvimbika kwakanyanya, gasi kushandiswa, ruzha rwakaderera, rwakakodzera kushandiswa Iine zvakanakira usability yakasimba.
Kushomeka kwesimba kwepasirese pari zvino kuri kuramba kuchikwira, uye zvinodiwa nevanhu zvekuchengetedza zvakatipoteredza zviri kuwedzerawo nekukwira.
Segadziriro yemagetsi yekupa magetsi network, chinyararire jenareta seti yave ichishandiswa zvakanyanya nekuda kweruzha rwavo, kunyanya muzvipatara, mahotera, nzvimbo dzekugara dzakakwirira, nzvimbo dzekutengesera hombe uye dzimwe nzvimbo dzine zvimiro zvine mutsindo zverunyararo zvakakosha midziyo.
chigadzirwa zvigadzirwa zve160KW gasi gasi / biogas jenareta
Iyo gasi jenareta inotora iyo yepasi gasi injini yeHuaBei dhiziri injini fekitori, iyo inotenderwa neDEUTZ. Iyo injini inyanzvi yeGerman.
NS akateedzana zvigadzirwa anoshandisa SDEC Simba base gasi injini.
Iyi nhevedzano yezvigadzirwa ine yakanakisa simba kuita, hupfumi, kuvimbika uye yakaderera mashini ekushandisa, ayo anodikanwa kwazvo nevashandisi.
Chigadzirwa Magadzirirwo E50KW Natural Gesi / Biogas jenareta
Chigadzirwa chine mashandiro akanaka kwazvo, akura uye akavimbika mashandiro uye mukurumbira mukuru. Chigadzirwa chine zvakanakira kutanga kwakanaka kuita, simba rakakwana, ruzha rwakaderera, kushanda kwakagadzikana uye kuvimbika kwakasimba. Inoshandiswawo zvakanyanya mu biogas, gasi rechisikirwo nemamwe maindasitiri.
Chigadzirwa Magadzirirwo E30 KW Natural Gesi / Biogas jenareta
NQ akateedzera anotora QUANCHAI base gasi injini uye yeJapan Yanmar tekinoroji. Iine hunhu hwesimba rakakwana, ruzha rwakaderera, vhoriyamu diki uye kugadzikana kwakanaka.
Chigadzirwa Magadzirirwo E10 Kw Natural Gasi / Biogas jenareta
ZveMibvunzo NezveZvedu Zvigadzirwa kana Pricelist
Ndokumbirawo Ubate Inwe Nesu
Yepamberi yekugadzira yekumhanyisa nzvimbo, Kwete. 6666, Yintong Street, Baotong Nharaunda, Yakakwira-Tech Zone, Weifang, Shandong, China